Dambudziko rakananga neBoeing 747 (FSX) yakakwana
mubvunzo Dambudziko rakananga neBoeing 747 (FSX) yakakwana
1 gore 5 ago #692 by Tillon
Pandinenge ndichibhururuka nemhando ipi zvayo yeFsx Boeing 747 Handigoni kuwana (injini, maitiro, ...).
Ndakaedza kutanga zvinhu zvose nekugadzirisa FSX neCD-ROM asi hapana chinobatsira.
Pane munhu anoziva kugadzirisa izvi here?
2 mwedzi 3 masvondo apfuura #1209 by FlankerAtRicoo
Apo imwe imwe ndege iri kupa mharidzo yakarurama ini ndinofungidzira kuti 747 mafaira ehuori akanganisa kana inzwi rako.cfg risingashayi kana risina chinhu mu Sounds yako folder ye747 ....
Uyewo chengetedza kana iwe usina kutora q accidently iyo inotinhira inzwi muFSX.
Iwe unogona kuedza kutora chechitatu chipikisi chepakiti (kune vakawanda vasina rusununguko) uye ona kana iwe uchida ivo ...
Zvinotevera mushandisi (s) akati Thank You: Tillon
Time chokusika peji: 0.500 mumasekonzi